Kooxda Arsenal oo u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta xiddig 22-sano jir ah oo Weerarka ka ciyaara – Gool FM
Kooxda Arsenal oo u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta xiddig 22-sano jir ah oo Weerarka ka ciyaara
(London) 22 Mar 2020. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsanayso inay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Celtic ee Odsonne Edouard.
22-sano jirkan ayaa ku riyaaqay ololaha ugu fiican kooxda Neil Lennon ee xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 22 gool, caawiyena ka ahaa 12 gool 27 kulan uu ka soo muuqday horyaalka.
Edouard waxaa qandaraaskiisa u kula jiro kooxda haysata horyaalka Scotland ku eg yahay xagaagan, sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, Macallin Mikel Arteta ayaa isha ku haya weeraryahankan halista badan.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in tababaraha Gunners uu doonayo inuu xoojiyo xulashadii weerarka, iyadoo aan loo eegin inuu Pierre-Emerick Aubameyang sii joogayo Emirates, wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka soo socda.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Gabon ayaa qandaraaskiisa Arsenal uu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedka 2021-22, waxaana loo badinayaa inuu ku biir karo kooxaha kala ah; Barcelona iyo Manchester United, kuwaas oo aad u baadi goobaya adeega Aubameyang.
Edouard ayaa u dhaliyay 11 gool lix kulan uu u saftay xulka France ee da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigan u dhashay dalka France ayaa kooxdiisa Celtic u saftay 59-kulan isagoo u dhaliyay 37 gool, wuxuuna ka mid yahay xdidigaha ugu wanaagsan ee ka dheela horyaalka Scotland.
Magacyada afarta kooxood ee ka dheela Premier League oo ku dagaalamaya saxiixa Philippe Coutinho oo la shaaciyey